दिमाग घरमा छोड्नुस् , फाटेको जुत्ता लगाएर सित्तैमा सिनेमा हेर्नुस्
Mon, Jun 18, 2018 | 11:26:32 NST
17:54 PM ( 8 months ago )
काठमाडौं, असोज २४ – निकेश खड्काको निर्देशन रहेको सिनेमा फाटेको जुत्ताले एउटा स्किम ल्याएको छ । कात्तिक १७ देखि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको सिनेमा फाटेको जुत्ताले सामाजिक सञ्जालमा फाटेको जुत्ता पोस्ट गरेर सिनेमाको पेजमा ट्याग गर्ने दर्शकलाई नै नयाँ जुत्ता उपहार दिने भएको छ । यस योजना अन्तर्गत दुई सय ५० जनालाई नयाँ जुत्ता उपहार दिइनेछ । हरेक हप्ता लक्की ड्रबाट छानेका विजेतालाई फाटेको जुत्ता टिमले घरैमा जुत्ता पुर्याईदिने व्यवस्था गरेको छ । सिनेमाका निर्माता अर्जुन कुमारसँग कुराकानी यस्तो छ ।
– फाटेको जुत्ता भन्ने जुन जुक्ती निकाल्नु भएको छ नि । यो खासमा के हो ?
तपाईसँग भएको फाटेको जुत्ता लगाएर आफ्नो खुट्टाको मात्र फोटो खिचेर फेसबुकमा पोष्ट गरेर हामीलाई ट्याग गर्नुहोला । किनभने ट्याग गरेपछि कसले–कसले गर्यो भन्ने थाहा हुन्छ नि । त्यहीबाट हामी लक्की ड्र गर्छौ र विजेता छान्छौं ।
– एउटा मान्छेले कति वटासम्म फाटेको जुत्ता लगाएर फोटो पोस्ट गर्न सक्छ ?
एउटा मान्छेसँग दुई तीन जोर छ भने त्यसको तस्विर पठाउन सक्छ । तर, फोटोमा तपाईको खुट्टा आउनुपर्यो । नभए त कतिले गुगलबाट पनि खोजेर पठाउनु हुन्छ । हामीले दुई सय ५० जोर जुत्ता बाँड्दैछौँ ।
– जुत्ता एउटा मात्र फाटेको हुनुपर्ने हो कि दुई वटा नै फाटेको हुनुपर्छ ?
एउटा मात्र फाटेको भएपनि केही फरक पर्दैन । जोडी जुत्ता लगाएर फोटो खिच्नुपर्यो । तर त्यो फाटेको पुरानो भने हुनुपर्छ ।
– फाटेको जुत्ता लगाएर आउनेलाई सित्तैमा सिनेमा हेर्ने अवसर मिल्छ रे भन्ने पनि सुनेका थियौं । यो के हो ?
यो चाहिँ हामीले सिनेमा रिलिज भएपछि गर्ने स्किम हो । सिनेमा हलमा फाटेको जुत्ता लाएर आउनेलाई मात्रै हामीले सिनेमा सित्तैमा देखाउने योजना बनाउदै छौँ ।
– तपाईहरुले यो सिनेमाको नाम किन यति गरिब राख्नु भएको ?
गरिब देशमा गरिब नागरिक छन् । सबै जना गरिब हुनुहुन्छ । के गर्नु हुदाँहुदै निर्देशक र निर्माता पनि गरिब छन् । (लामो हाँसो )‘फाटेको जुत्ता’ नाम गरिब भएपनि सिनेमा भित्र गहिराई भने पक्कै रहेको छ ।
– प्रचार प्रसारमा कलाकारहरु जुट्नु पर्ने हो । तर तपाईहरुले ‘फाटेको जुत्ता’संकलन गर्न थाल्नुभयो । यो आखिर किन ?
कलाकारलाई हामीले एउटा सिनेमाको लागि लियौँ । अहिलेलाई कलाकारलाई मात्र जोगाएर राख्नुपर्ने अवस्था छैन । यो एउटा टिम हो । प्रचारप्रसार गर्न शैली हो । हामीलाई यो स्किम रमाइलो लाग्यो । हामीलाई कम्पनीले जुत्ता पनि दिएको छ । त्यसलाई के गर्ने भन्दा दर्शकलाई दिउँ न त भन्ने हो । आएको कुरा दिदाँ दर्शकहरु प्नि खुशी नै बन्नु हुन्छ ।
– दर्शकहरुले कुन कम्पनीको जुत्ता पाउँछन ?
हामीसँग तीनवटा कम्पनी छ । ब्रान्डको नाम भने अहिले नै नखुलाउ होला ।
– फाटेको जुत्तालाई कस्तो सिनेमा भन्न मिल्छ ?
यो सिनेमा हेर्न तपाई दिमाग घरमा राखेर आउनुहोस् । सिनेमाको मज्जा आनन्दसँग लिनुहोस् । ‘छक्का पन्जा’ जस्तै हो । बल्ल बल्ल सिनेमा हेर्न आएको हुन्छ आफ्नो परिवारसँग कहाँ दिमाग लिएर आउनु । सिनेमा भनेको मज्जा लिनको लागि हो । यो कमेडी जनरामा बनेको सिनेमा हो । यो बोर्डर साइडमा जुन क्राइम हुन्छ नि त्यसमा आधारित छ । त्यहाँ हुने अपराधलाई हामीले कमेडी रुपमा प्रस्तुत गरेका छौ ।
– समीक्षकले के दियो के छ भनेर हेर्छन् । तपाईको सिनेमाको पनि समीक्षा आउलाँ । फेरि तपाई दिमाग घरमा राखेर आउनु भन्नु हुन्छ । समीक्षकलाई के भन्नुहुन्छ ?
हामीले सिनेमा बनाउने भनेको समीक्षकको लागि होइन । उहाँहरुले आफ्नो पारामा समीक्षा गर्नुहुन्छ । त्यो उहाँहरुको अधिकार हो । उहाँहरुको समीक्षालाई किन गरिस् ? भन्न पनि मिलेन । तर, मैले सिनेमा बनाउने समीक्षकको लागि भने होइन । म दर्शकको लागि सिनेमा बनाउँछु । सिनेमा राम्रो भयो भने हाम्रो हातमा जित भयो । फ्लप भयो भने हार भयो ।
उज्यालो र www.gufgaff.com को सहकार्य